Ciyaarihii Olombikada 2012 oo si rasmiya oga furmay London. – Radio Daljir
Luulyo 28, 2012 11:53 b 0
London,28-Jul – Ciyaarihii Olombikida sanadka 2012 ka ayaa xalay xili danbe? ka furmay meel ka baxsan magaalo madaxda Britain ee London iyadoo ay ka qayb galeen furitaankoodii shakhsiyaad caana oo ay ugu horeysay Boqorada Uk Quen Elezptht, waxaana isku soo baxay kumanaan qof oo ka kala yimid dunida daafaheeda isugna jiray ka qayb galayaal iyo daawayadaal.
Furitaanka ciyaaraha Olombikiska ayaa lahaa xiiso balaaran waxaana fagaarayaasha tartamadu ay ka furmayeen lagu soo bandhigay fantasyo Caalamiya kuwaasoo ay si weyn ugu bogeen dadkii sheeda kala socday iyo kuwii goob jooga u ahaaba.
Wadan walba waxaa ka socday Ciyaartoy u matalaya dalkooda kuwaasoo mid kasta uu lulayay calanka dalkiisa.
Soomaaliya sanadkan waxaa oga qayb galay labada dhalin yaradaa ee kala ah Max ed cali max ed iyo Samsam cali max ed iyadoo sidoo kale oo Uk ku sugan yahay bilad dahablaha ordaa Cabdi bile Cabdi, Max’ed iyo Samsam ayaa dhawaan ka tagay magaalada Muqdisho.
C/qafaar Max’ed guure oo ka mida Dadka u olooleeya Hormarinta Puntland ee Jaaliyada Uk xalayna tagay goobta ay ka furmayaan ciyaaraha ayaa Radio Daljir oga waramay sida ay ku furmeen ciyaaraha iyo muhiimada ay sanadkan u leedahay Soomaaliya.
Guure ayaa sheegay inay sanadkan Uk xooga saartay sidii ay Tartanka Olombikada ugu furmi lahaayeen si Nabada galyaa ayna ugu dhamaan lahaayeen, Ciidan fara badan oo isugu jira qaybaha kala duwana lagu arkayay wadooyinka.
Jaaliyadda Soomaalida ee UK ayaa si weyn isugu diyaarinaya sidii ay taageero balaaran ugu fidin lahaayeen Dhalin yarada Soomaalida ee ka qayb galaya Olombikada, Iyadoo 3 bisha 8aad ee fooda nagu soo haysana uu Tartami doono Max ‘ed Cali Max’ed oo ah wiilka u tartamaya Soomaaliya, halka Samsamna walina aan la soo gudbin jadwalkeeda ciyaareed.